Dowlad Xiriir Wanaagsan la leh Soomaaliya iyo Imaaraadka oo codsatay in ay kala dhex gasho labada dal – Daily Som
warar hoose oo aanu helnay ayaa sheegaya in mid ka mid ah Dowladaha Xiriirka Fiican la leh Dalalka ay ka dhex tafan tahay ee Soomaaliya iyo Imaaraatka uu isku ayayo in uu arinta Cakiran ee haatan ka taagan labada dal dhex galo.
Wasiirka Arimaha Dibada Soomaaliya ayaa ka sheegay Magaalada Qaahira ee xarunta Jaamacada carabta xili uu ka qayb galayay shirka wasaaradaha Arimaha Dibada ee dalalka ku midaysan jaamaca, in soomaaliya ay umadax banaan tahay howlaheeda Arimaha Dibada Dowlada Imaaraatkane ay jjoojiso Faraglinta Muuqata ee ku hayso dalka.
Wuxuu codsaday in la ixtiraamo Madax baanida iyo Midnimada Soomaaliya iyo i aanu mar danbe dal ajnabi ah iyo in aanan Heshiisyo lala galin Goabalada iyada oo aan Fasax laga haysan Dowlada Federaalka
Wixii xiligaas ka danbeeyay waxaa la qorsheeyay in aqlabiyad leh loo cambaareeyo dowlada Imaaraatka oo si cad ugu xad gudubtay Madax banaanida Soomaaliya, waxaasa arinta in uu xaliyo Codsatay Dowlada Sacuudiga oo labada xiriir wanaagsan la leh.
Diblomaasiyiin ka tirsan wasaarada Arimaha Dibada ayaa noo xaqiijiyay in sacuudigu uu codsaday in la xaliyo khilaafka ka aloolsan Soomaaliya iyo Imaaraatka oo waayihii udanbeeyay sii xoogaysanayay.
Dowlad Xiriir Wanaagsan la leh Soomaaliya iyo Imaaraadka oo codsatay in ay kala dhex gasho labada dal added by Staff on March 10, 2018